Daad GQ-KG (L) / 01/02 Cable Grouting Agent wershad iyo soosaarayaal | Gaoqiang
GQ-KG t wuxuu ka kooban yahay qalab balaadhinta yar yar, soo-saaraha wax-soo-saarka sare, noocyo kala duwan oo ah maaddado aan dabiici ahayn iyo polymer dabiici ah oo lagu daray PO, 42.5 sibidh. Dareeraha aadka ufiican, qulqulatada xasiloon, darajo buuxin wanaagsan, hoos u dhac la'aan, ballaarin yar, ma laha walxo waxyeelo u leh xoojinta. Waa sheyga alaabada lagu buuxiyo kanaallada cadaadiska ka hor, xiisadaha iyo kala-goysyada xubnaha la taaban karo. Tayada badeecadu waxay buuxineysaa shuruudaha TB / T3192-2008, JTG / TF 50-2011 iyo heerar kale
1.With dheecaan aad u fiican iyo waqti lumis yar, fududahay in la cadaadiyo hawlgalka saxarka
Saamaynta kor u qaadista ayaa muuqata. Jinka wuxuu leeyahay awood sare (> 50MPa) iyo isku dhejis wanaagsan kadib adkaanshaha
Hoos udhaca ama balaadhinta uumiga kadib, xasiloonida mugga wanaagsan
4.Sururku ma dhiig baxayo, wuxuu ilaalin karaa waqti shaqo oo dheer, shahaadada buuxinta slurry waa wanaagsan tahay
5.Law alkali, daxal la'aan bar bir ah. Aan sun ahayn, aan waxyeello lahayn, ammaan u ah caafimaadka iyo deegaanka
1. Dhammaan noocyada tareenka iyo boostada weyn - iskuxidhka tunnelka qulqulaya
Cunnada loo yaqaan 'Tunnel grouting' ee dhismayaasha waaweyn ee la qadaray
3. Dhiirrigelinta warshad tamarta nukliyeerka
4. Jooji qulqulka qulqulka qaybaha kala duwan ee shubka
1.Kontrol saamiga biyaha-sibidhka KG (L) 01≤0.33, KG (L) 02≤0.28 waxaa lagu go'aamiyey baaritaanka kahor isticmaalka
Marka loo eego saamiga isku dhafan ee isku dhafka ah, isku darka waqtiga aan ka yarayn 4 ~ 5 daqiiqo, waa inuu ahaadaa mid waafaqsan shuruudaha walaaqida, ku darista biyaha si loo isticmaalo laba habab
Mashiinka wax lagu shubo waa in horay loo sii nadiifiyo ka hor inta aan la soo bixin. Kala-baxa waa in si isdaba joog ah loo kiciyaa si loo ilaaliyo isku mid ahaanta iyo dareeraha dareeraha. Qashinku waa in lagu buuxiyo 30 daqiiqo gudahood
Bamka cadaadiska bistooska waa in loo adeegsadaa qashin-gelinta, cadaadiska qasnaduna waa inuusan ka badnaan 0.6mpa
Noocyada kala duwan ee sibidhka ee ka imanaya aagagga wax soo saarka kala duwan ayaa saameyn weyn ku leh saameynta dalabka wakiilka raashinka. Waxaa la soo jeedinayaa in xaddiga ugu wanaagsan ee isku darka noocyada sibidhka iyo wakiilka raashinka ay tahay in lagu go'aamiyo baaris ka hor inta aan la isticmaalin. Isku day inaad doorato noocyada sibidhka ee la jaanqaadka wanaagsan, yaraynta iyo xoogga sare
Xidhmada & Kaydinta
Badeecadani waa budo, waxay kuxirantahay baco balaastik ah oo lagu duubay filim caag ah, 40kg / bag ama 50kg / bag
Adkaysi u leh roobka, qoyaanka iyo waxyeelada, oo shaqeynaya muddo nus sano ah. Waxyaalaha aan ololi karin iyo waxyaabaha qarxa waa in si habboon loo hayaa
Hore: GQ-208 Agent Antifreeze Agent